China 2020 ihe eji eme ohuru ohuru ihe nlere di nma nke nwere ike ikpochapu ala ulo oru na ndi na emeputa akwa | Xueruisha
Otu n'ime akpa ụra na-ewu ewu kachasị mma maka njem, ịnyịnya ígwè, azụ azụ na ebe a na-ama ụlọikwuu, Light Luxury bụ ngwaọrụ kachasị amasị n'ime ndị njem na ndị njem njem, ọ bụkwa nhọrọ kachasị elu maka ndị ahụ na-achọ ịnwụ ọkụ n'elu ugwu mgbe oge ọ bụla. Enwere ike iji ya maka ubi gị, azụ ụlọ, ogige, ebe ọ bụla ị nwere ike iche. Ọ bụrụ na ịchọrọ iguzogide ihu igwe oyi, nke a ga-abụ ngwaahịa kachasị enyere gị aka. Ọ na-eji teknụzụ ịkwa akwa kachasị elu iji melite ngwaahịa ahụ na igbochi ala ịpụ n'ime. Akpa ụra a nwere 210 of 80cm buru ibu ma dabara adaba maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị jụụ nke dị n’etiti 1 ℃ ruo 7 ℃ nwere ike igbo mkpa nke ịma ụlọikwuu n’èzí kwa ụbọchị. Windproof drawstring na mkpọchi uwe nyagide ikechi imewe mma n'ozuzu windproof na-ekpo ọkụ mmetụta nke na-ehi ụra akpa. Humdị nchedo ihu humanized ọzọ, na-enye gị nchebe zuru oke. Anyị na-eji 20-deniel naịlọn Fabric na magburu onwe mgbochi dọkatụrụ adọka, ala na-àmà, mmiri ọgwụ ọchụ arụmọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, 90% ọbọgwụ ala dị ka na-ejuputa ihe onwunwe, nke bụ nnọọ fechaa na-ekpo ọkụ nke ukwuu ihe. Ọ nwere ike inyere gị aka ịnagide ihu igwe oyi. Fechaa, mfe na-ebu, Portable, Minimal mkpọ size na mgbanwe nke na-aga n'ihu baffles ekwe ka Ìhè Okomoko nwekwara-agbanwe n'ime ọkụ ọnwa n'ụzọ zuru okè. Tụkwasị na nke a, akpa ụra a bụ ụdị ejiji na ụdị ọrụ, anyị na-enyekwa nhọrọ dị iche iche maka agba, ịke, nha na wdg. mma n'èzí na ngwaahịa. Yabụ, ịnabata ịme nchọgharị na ntanetị wee họrọ otu n'ime ha, ekwenyere m na a ga-enwerịrị otu ụdị nke ga-egbo mkpa gị. I nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị, ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị.
Mgbe ị na-ahọrọ akpa ụra, na mgbakwunye na ị attentiona ntị na ụfọdụ ihe ndị bụ isi (dịka iji akpa ụra, ikpo ọkụ, ihe ndozi, ọdịdị, ogologo, wdg), anyị kwesịrị inyocha akpa ihi ụra ị ga-azụta ụfọdụ nkọwa. Na nkenke, enwere ọtụtụ ụdị ihi ụra, mana dị ka akụrụngwa egwuregwu ndị ọzọ n'èzí, nke kachasị ọnụ bụ nke kachasị mma. Naanị ndị nwere ike igbo mkpa gị n'ụzọ dabara adaba ma daba na egwuregwu gị n'èzí bụ nhọrọ kachasị mma gị.
Osote: 2020 factory oyi okenye n'èzí maa ụlọikwuu ọbọgwụ / goose ala na-ehi ụra akpa wholesaler